Gini mere ihe nlere nke Skype m jiri di ocha? - Skype
Isi > Skype > Skype vidiyo blurry - mkpebi bara uru
Skype vidiyo blurry - mkpebi bara uru
Gini mere ihe nlere nke Skype m jiri di ocha?
Na abataVidio Skypeoku nwere ike iputablurryma ọ bụrụ na kọmputa gị ma ọ bụ na netwọk na-overloaded ma ọ bụ na ọ bụghị ike zuru ezu iji mee ihe omume.Vidiooku na-ezipu ego buru ibu nke data na andntanetị ma choo njikọ brọdbandị iji nwee onyogho doro anya.
Kedu ka m ga esi edozi igwefoto blurry m na Skype?
NwetaSkypenhọrọ vidiyo site na ịpị 'Ngwaọrụ' na menu faịlụ ma họrọ 'Nhọrọ.' Pịa nhọrọ 'Video Settings' n'akụkụ aka ekpe nke windo ahụ wee pịa 'Ntọala Weebụ' iji gbanwee ntọala dịka nchapụta, iche, hue, saturation, ịkọ nkọ, gamma, nguzo ọcha, ihe mejupụtara azụ na ...
Gini mere eji amata vidiyo vidiyo adịghị mma?
Inwe nsogbu naogonke gịOku Skype? Njikọ ịntanetị gị - ma ọ bụ nke enyi gị - bụ nke nwere ike ịda iwu. Aogbenyenjikọ canntanetị nwere ike ibute oku dara ada, igbu oge, naogbenye-ogoọdịyo navidiyo. Ga-ahụkwaKpọọ Ogoegosi mgbe enwere nsogbu.
# N / D # N / D
Kedu ihe kpatara desktọọpụ Skype ji nwee nzuzu windo etiti ọgbakọ?
Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa na ọgbakọ anyị ugbu a bụ ahụmịhe na - anaghị akwụ ụgwọ maka ndị niile edenyere aha ha wee banye - Banye ebe a taa! Emelitere site na Windows 8.1 na Windows 10 na desktọọpụ Skype dị ugbu a. Onwere onye maara ka esi edozi okwu a? Daalụ! xandros9 nwere mmasị na nke a. Ọ bụ ihe nlele.
Kedu ihe kpatara njirimara vidiyo Skype m ji dị njọ?
A na-ejedebe ọsọ ọsọ vidiyo Skype site na ọsọ Internetntanetị na ogo weebụ kamera gị. Kpọọ oku vidiyo na ndị enyi gị site na iji kamera weebụ na mmemme Skype. Ndị ọkwọ ụgbọ mmiri kamera ochie ma ọ bụ nke ochie nwere ike ime ka kamera kamera ahụ rụọ ọrụ na-erughị mma. Onye ọkwọ ụgbọ ala bụ mmemme kọmputa nke na-enye ohere ka sistemụ arụmọrụ na ngwaike jikọọ iji kwurịta okwu.
Kedụ ka m ga-esi gbanwe ihie nke vidiyo Skype m?
Nweta nhọrọ vidiyo vidiyo site na ịpị 'Ngwaọrụ' na menu faịlụ ma họrọ 'Nhọrọ.' Pịa nhọrọ 'Video Settings' n'akụkụ aka ekpe nke windo ahụ wee pịa 'Ntọala kamera' iji gbanwee ntọala dịka nchapụta, iche, hue, saturation, ịkọ nkọ, gamma, nguzo ọcha, ndozi ọkụ azụ na uru nke ntanetị kamera
Gini mere igwefoto m n’adighi nma?
Ndị ọkwọ ụgbọ ala kamera ochie ma ọ bụ nke ochienwere ike ime ka kamera ntaneti rụọ obere ihe na-achọsi ike. Onye ọkwọ ụgbọ ala bụ mmemme kọmputa nke na-enye ohere ka sistemụ arụmọrụ na ngwaike jikọọ iji kwurịta okwu. Ọ bụrụ na kamera weebụ gị gosipụtara nzuzu mgbe ị na-eji ya na Skype, ị kwesịrị ibudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ maka kamera gị.